Tsy dia niova firy ny tomponandraikitra na misy 120 mahery aza ireo « Inspecteur d'Administration Pénitentiaire » nivoka ny sekolim-pirenena ENAM raha toa ka 17 ny isan'ny foibem-paritra manerana ny Nosy ary 05 ny foibe ao amin'ny ministera miampy fitaleavana ankapobeny iray sy sekoly mpanofana ENAP iray ao Tetezambaro Toamasina.
Raha ny zava-misy amin’izao fotoana dia efa antitra ny ankamaroan’ny foto-drafitrasa, hany ka na mirodana am-pitoerana toy ny tany Antsohihy, na manamora ny fitsoahan’ny gadra toy ny tany Maroantsetra izay nivoaka avy eny an-tafontrano ny enin-dahy ny alin’ny 9 aprily 2019.
Feno hipoka ireo fonja, saika manerana ny Nosy, ary betsaka amin’ireo voafonja no tsy mbola nitsara. Tranga izay mampitombo ny ahiahy amin’ny fisiana kolikoly. Nigagam-bahoaka ohatra ny nahavotsotra an’i Houcine Arfa, vazaha frantsay mpiara-miasa tamin’ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, tamin’ny 28 desambra 2017 ka nitsoahany any Frantsa.
Tsy lavitra izany ny nandraisana fanapahan-kevitra ny tsy maintsy namerenana an’i Stéphanie Roger Ralala, atidohan’ny “kidnapping” sy Claudine Razaimamonjy ho ao amin’ny fonjan’Antanimora-Antananarivo.